Tsy hita be ihany izay fampanjakana ny fandriampahalemana | NewsMada
Tsy hita be ihany izay fampanjakana ny fandriampahalemana
Tsy mandry ny tanàna… Marin-dratsy ny hoe: ny olo-marina indray no matahotra mandeha irery na mandeha alina. Misy ireo olon-dratsy mirodorodo na manao be fiavy; eny, na amin’ny antoandro aza: mirongo fitaovam-piadiana.
Tsy lavina, manao izay efany sy afany ny mpitandro filaminana. Saingy ny manao zavatra tsy mora. Na ny manao mora koa tsy zavatra. Vitsy anisa ny mpitandro filaminana, tsy ampy fitaovana, mandalo ihany amin’ny faritra aleha…
Vao vita, ohatra, ny hetsika manokana amin’ny faritra iray, nirongatra indray ny asan-jiolahy raha vao lasa ireo mpitandro filaminana. Ahina hahery vaika noho ny teo aloha aza izany, raha ny filazan’ny sasany. Misy antony ao…
Eo, ohatra, ny hoe fanaovana valifaty fotsiny izao, na fampisehoan-kery, na fanalana fo, na fampihorohoroana ny mponina; eny, na ny mpitandro filaminana aza. Fa misy koa ny antony fototra mila fanahadihadiana maharitra sy lalina.
Anisan’izany, ohatra, ny hoe: avy aiza marina ireo fitaovam-piadiana ampiasain’ny dahalo? Misy be lavitra sy tsara kokoa no ho ny an’ny mpitandro filaminana. Mankaiza, ohatra, ny omby halatra, na taolam-paty… ?
Misy milaza fa tsy noho ny fahantrana na fitia te hanambe fotsiny izany, fa mety ho fanakorontanana. Tonga hatramin’ny hoe misy ambadika politika. Misy olona na hery na firenena vahiny ao ambadika? Mila fanadihadiana…
Mby ao an-tsaina amin’izany ny fisian’ny akoran-karena eto Madagasikara. Ifanosehana sy mampiady ny sasany mivolon-ko tompony? Izay manan-tsira, mahay mahandro. Izay matanjaka no mifehy ny fandriampahalemana?
Mba hafahafa koa ny hoe hasiana fiarovana manokana, ohatra, ny karazana vahiny toy izao na izatsy. Manakarama mpitandro filaminana manokana izy ireo amin’izany. Ho an’ny manam-bola ny fandriampahalemana?
Ny efa tsy ampy isa, tsy ampy fitaovana, tsy maharitra amin’ny toerany anaovany iraka manokana… Mbola lasa manokana amin’izany. Ho an’iza marina ny hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany? Ho an’ny rehetra…